“ စာသင်ခန်းဝင်ရန် အချိန်ရောက်ပြီ” ကိုဗစ်ကူးစက်နေစဉ်မှာပင် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ် - Xinhua News Agency
ချွန်းဘူရီ ၊ ထိုင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် လပေါင်းများစွာကြာ ပိတ်ထားခဲ့ရသော စာသင်ကျောင်းများကို ကပ်ရောဂါနှိမ်နင်းရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတူ ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်းဘူရီပြည်နယ်အတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ခုတွင် ကျောင်းတက်လာသောကလေးငယ်များ လက်ဆေးခြင်း ၊ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းများ ပြုလုပ်စဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဒေသခံကျောင်းသား/ကျောင်းသူများသည် နှာခေါင်းစည်းများ တပ်ဆင်ကာ ၎င်းတို့၏ ကျောင်းဝင်းစာသင်ခန်းထဲ မဝင်ရောက်မီ ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း နှင့် လက်သန့်ဆေးရည်ဖြင့် လက်ဆေးခြင်းတို့ကို အသီးသီးပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
“It’s time for class” — Schools in Thailand reopen amid COVID-19
CHONBURI, Thailand, Nov. 16 (Xinhua) — Closed due to the COVID-19 pandemic for several months, schools in Thailand reopened with relevant anti-epidemic measures on Nov. 15. Local students wearing masks have their temperature checked and hands disinfected before entering the campus to attend classes.
Students get their body temperature checked and their hands disinfected ataschool in Chonburi, Thailand, Nov. 15, 2021. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
အာဆီယံနိုင်ငံများမှတင်ပို့သည့် အသီးအနှံများအား တရုတ်နိုင်ငံတွင် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုဖြင့် ရောင်းချခြင်းအောင်မြင်
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလွိုင်အော်စတင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိ